ओलीले बैठकमा भने, ‘पार्टी एकता भङ्ग गरौँ, अब जेठ २ गते फर्कौँ’ – rastriyakhabar.com
ओलीले बैठकमा भने, ‘पार्टी एकता भङ्ग गरौँ, अब जेठ २ गते फर्कौँ’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रस्तावको प्रतिउत्तर प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिवेदन सचिवालयका सदस्यलाई वितरण गर्नुपूर्व उनले बैठकमा ४ महत्वपूर्ण कुरा राखेका एक सचिवालय सदस्यले नागरिकखबरलाई जानकारी दिए ।
१. बैठकमा ओलीले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव झूटको पुलिन्दा भएकाले बैठकमा छलफल गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले बैठकमा भने, ‘प्रचण्ड कमरेडले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव राजनीतिक प्रस्ताव होइन, त्यो झूटको पुलिन्दा हो । संगीन आरोपसहित आएको झूटको पुलिन्दा बैठकमा छलफल गर्न र बैठकमा प्रवेश गर्न सक्दैन ।’
२. ओलीले आफूले बहुमतको निर्णय नमान्ने पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘टाउका गनेर मान्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ । बहुमत-अल्पमत गरेर निर्णय गर्ने र त्यसलाई मान्न सकिँदैन । यो विधि, पद्दतीको विरुद्ध हुन्छ ।’
३. प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्नेमा ओलीले जोड दिए । उनले बैठकमा भने, ‘लाल्छाना पत्र फिर्ता लिनुपर्छ । त्यसलाई फिर्ता लिएर माफी मागेपछिमात्रै पार्टी एकतामा जान सकिन्छ । नत्र पार्टी एकता हुँदैन ।’
४. ओलीले पार्टी एकता भंग गर्नका लागि प्रस्ताव गरे । उनले भने, ‘अब पार्टी एकता भंग गरौँ, पार्टी एकता भंग गरेर अब जेठ २ को अवस्थामा फर्कौँ ।’
आइतवार, मंसिर १४, २०७७ मा प्रकाशित